Ciyaaraha kale | KONGOLISOLO
Gabdhaha badankood iyo ragga qaar waxay jecel yihiin inay sawiraan dabada saxda ah si ay uga dhigaan kuwo kufiican maqaarkan cusub ee "skinny Jeans". Hadaad tahay qof ...	Akhri wax dheeraad ah
Inkastoo aan la rumeysan karin, haddana carruurta dhabta ah, fanaaniinta heerka sare ah, waxay ka yimaadeen Itoobiya iyo Afrika: waxay muujiyeen muuqaalka adduunka oo ah in farshaxanno madow ay la mid yihiin kuwa kale ee tartamada iyo qaaradaha kale ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 5, 2019 03: 03 No Comments
Quruxda farshaxanka iyo adkeynta goobahooda iyo acrobatics-ka waa lama huraan. Ceeb maleh in madow noqdo. Waxay dadka cadaanka ahi sameeyaan, dadka madoow ayaa sameyn kara.	Akhri wax dheeraad ah
Shan yaab oo dhaqameedyo Afrikaan ah oo aan sumcadda madow / Afrikaanku jirin: waxaa jira yaabab dhaqameedyo loo aaneeyey dadka kale, laakiin kuwaas oo u badan asal ahaan madow / Afrikaan asal ahaan
Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 19, 2018 06: 34 No Comments
In la aqbalo in jinsiyada aadanaha ee laga yaabo inay Afrika ka bilowdo weli waa kiniin adag oo la liqo, iyada oo aan loo eegin caddaynta jirta. Dhammaanteen waxaynu ku biirinaa foomka iyo ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug09 01: 46